Mpilaza vaovao voalohany tao amin’ny Televiziona Malagasy (TVM) i Gabriel Rabesahala fantatry ny maro tamin’ny anarana hoe Gabhy Rabesahala, 53 taona lasa izay, faha Philibert Tsiranana. Nitana andraiki-panjana tamin’ny ministera sy andrimpanjakana ihany koa izy fahavelony.Efa Talen’ny TVM ihany koa i Gabhy Rabesahala. Anadahin’i Gisèle Rabesahala izy. Nodimandry ny alahady 08 septambre 2019 izy. (Jereo Sary Tohiny)
Akamasoa (Jereo Sary Tohiny)
Araky ny efa nambara tamintsika teto ihany, ny Fiangonana Katolika dia manana rafitra ifotony. Izay ny Diosezy no fitsinjaràny (mitovitovy amin'ny Faritra na Région eto amintsika). Ny Eveka no ambony indrindra raha ny an-tanatohatra no resahina, ny Papa izany dia Evekan'i Roma, any ny Dioseziny, ny Kardinaly koa dia Eveka, ary manana ny Dioseziny ihany koa izy, mpiara-miasa akaiky ny Papa ny Kardinaly, ary azo fidiana ho Papa raha latsaky ny 80 taona, ary mifidy Papa raha misy tsy maha eo intsony ny Papa, izay mandat à vie, raha tsy hoe miala izy toa an'i Papa Benoit XVI. Ny antsika Malagasy, ny Kardinaly Désiré Tsarahazana dia Evekan'ny Diosezin'i Toamasina, izy moa dia sady Arseveka ihany koa, izany hoe mandrindra Diosezy maromaro, antsoina hoe Archidiocèse any amin'ny faritra no antsoina hoe Arseveka.
Isany nanamarika ny fitsenana ny fotoana nahatongavan’i Papa Fransoa teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato androany tolakandron’ny zoma 6 septambra 2019, ny fanolorana fehezam-boninkazo ho azy, marika fa tonga soa eto Madagasikara izy. Voafidy hisolontena ny ankizy Malagasy, nanolotra ny fehezam-boninkazo ho an'i Papa Ray Masina, i Lahiniriko Norvé, zazalahy 12 taona avy any Mahabo Diosezin’i Morondava sy Andriamanantena Anja, zazavavy kely 10 taona avy ato amin’ny Diosezin’Antananarivo. (Jereo Sary Tohiny)
Hotanterahina ny 17 ka hatramin’ny 21 septambra 2019 ho avy izao ao Ranohira, Faritra Ihorombe ny Festival Karitaky andiany faha-11. Hetsika ara-kolontsaina mampalaza ny Bara ny Karitaky, ary natao indrindra isarihana mpizahatany. (Jereo sary Tohiny)
Voaporofo indray teto amin’ny « Energies 2019 », izay fifaninanana mikasika ny tetikasa momba ny angovo aty amin’ny ranomasina indianina, fa mahay ny tanora Malagasy. Nisongadina ary nibata ny loka voalohany ny mpianatry ny lycée Andrianampoinimerina Sabotsy Namehana – Antananarivo Avaradrano tamin’ny alalan’ny tetikasa "Biogaz" ao amin’ny sekoly ianaran’izy ireo. Tatsy amin'ny nosy Maorisy no natao ity fifaninanana amin'ny famokarana angovo ity, izay natokana ho an'ireo mpianatra amin’ny Lycée. Ny Vaomieran’ny ranomasina indianina (COI) sy ny tambazotra Eco-Schools Océan Indien no nikarakara ny fifaninanana.
Tanterahina androany 28 sy rahampitso 29 aogositra ny fikaonan-doha iraisam-pirenena, izay atao eny amin'ny ENS Ampefiloha. Izany moa no atao dia ny mba ahafahana manabe ireo mpiofana rehetra eo amin'ny sehatry ny fampianarana, ary mampihofana ihany koa amin'ny ambaratonga ambony, ahafahana hisera sy hifankahazo amin'ny kolontsaina. Ny tanjona amin'ity fikaonan-doha ity moa dia ny fanehoana ny fampivoarana ny rakibolana amin'ny teny malagasy sy teny vahiny, ary mitady mandrakariva ny ahatsara ny fanabeazana. (Jereo Sary Tohiny)
Varotra fampirantiana mandritry ny telo andro, izay manomboka androany ka hatramin'ny sabotsy 31 aogositra ho avy izao, izay atao eny amin'ny zaridainan'Antaninarenina . Ity varotra fampirantiana ity moa dia manasongadina ny Vita Malagasy. (Jereo Sary Tohiny)
Ny foibe FJKM dia manomana indray ny andiany faha 2 an'ilay "Rodorodo Haona Fi 2019" izay atao ny faha 30 sy 31 oktobra ary 01-02 Novambra ho avy izao, izay atao eny amin'ny village Voara Andohatapenaka. Homanina araka izany ny fanentanana aram-pilazantsara sy seho an-tsehatra, ny fitilina ireo aretina maro, fampihofanana sy famelabelaran-kevitra. Ankohatran'ny Tsena sy varotra fampirantiana dia eo ihany koa ny kilalao sy fifaninana samihafa. (Jereo Sary Tohiny)